Computer ပြူတင်းပေါက်ကို ခိုးဝင်နိုင်သော mr.kon boot အကြောင်း | တောရက်စ် (mc)
Computer ပြူတင်းပေါက်ကို ခိုးဝင်နိုင်သော mr.kon boot အကြောင်း
window အမျိုးမျိုးကိုကျော်ဝင်နိုင်တဲ့နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတစ်ပါး computer ကိုကိုယ်သုံးထားတာမသိစေခြင်ရင်ဒီနည်းကအသင့်တော်ဆုံးပါလို့ပြောခြင်ပါတယ်။
Password ကို ပြောင်းပစ်နိုင်တယ်။ Windows Key ဆိုရင် Password ကို 12345 အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတယ်။ အဲနောက် SAM Inside ဆိုရင်လည်း Password ကို Blank ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖောက်ထွင်းမဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီ tools တွေကို သုံးလည်း ပိုင်ရှင်ကတော့ သိမှာပါဘဲ။
အခု Kon Boot ကတော့….
အခု ကျွန်တော် Kon Boot အကြောင်းကို ရေးလိုက်တာဟာ ကျွန်တော်ကသူများcomputerကိုခိုးဝင်နိုင်ဖို့နည်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါမျိုး နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပြီဆိုတာကို မိတ်ဆွေတို့ကိုသိစေချင်တာပါ။သိပြီးသားဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးဆက်မဖတ်ပါနဲ့တော့ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ အပြောသက်သက်တင် မဟုတ်ဘူး။
ယေဘုယျပြောရရင်တော့ Windows Password ဟာ လုံခြုံမှုမရှိတော့ပါဘူး။ Admin Password ကို Hack လုပ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာ NTFS Permission ပေးထားတဲ့ Data တွေကိုပါ ခိုးယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုးကျိုးတွေ ကတော့ တကယ်တမ်းအများကြီးပါ။
တကယ်တမ်းတော့ အရေးကြီး Data တွေကို Portable Hard Disk ထဲပဲ ထည့်ထားလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
kon boot ဘယ်လိုသုံးလဲသိခြင်သလား?
လိုတိုင်းတရနိုင်တဲ့ google ကြီးထဲကို kon boot လို့ရိုက်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေသိခြင်တဲ့ mr.kon boot အကြောင်းဖြေပေးမယ့်siteတွေ
ရှာရမယ်ပျင်းတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က link ကိုသာ click လိုက်
ဒီနေရာကတော့kon bootကို mediafire မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့နေရာပါ။အဲကနေလည်းယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by တောရက်စ် (mc) on September 5, 2012 in နည်းပညာများ, ဘလော့များ.